Maxaa Loo Cusbooneysiiyay Cunaqabateynta Hubka Ee Soomaaliya? – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAMaxaa Loo Cusbooneysiiyay Cunaqabateynta Hubka Ee Soomaaliya?
November 16, 2018 Falastiin Axmed WARARKA MAANTA Comments Off on Maxaa Loo Cusbooneysiiyay Cunaqabateynta Hubka Ee Soomaaliya?
Waddamada Soomaaliya iyo Eritrea oo ku wada yaalla gobolka geeska Afrika ayaa waxaa saarneyd cunaqabateyn dhanka hubka ah hase ahaatee, Qaramada Midoobay ayaa dhawaan cod aqlabiyad leh cunaqabatentaas uga dul qaadday Eritrea halka ay tii Soomaaliya saarneydna mar kale cusbooneysiisay, waxaana su’aalo badan la iska weydiinayaa sababta loo kala qaaday labada dal.
Soomaaliya ayaa ka mid ahayd dalalkii u ol’oleynayay in xayiraadaha hubka, dhaqaalaha iyo safarradaba laga qaado Erirtea.
Madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Raysul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa soo jeediyay in la soo af jaro xayiraaddaas oo Eritrea saarneyd muddo 9 sano ah, ka dib markii xal laga gaaray colaaddii u dhaxeysay Itoobiya iyo Eritrea.
Horay waxaa dowladda Eritrea xayiraaddaas loogu soo rogay ka dib markii lagu eedeeyay iney taageero siiso ururro hubeysan oo Soomaaliya ka dagaallama.
Haddaba maxaa sababay in Soomaaliya oo dagaal xooggan kula jirta Al shabaab lagu sii cusbooneysiiyo cunaqabateynta hubka.
Maxamed Nuur Caalin oo ah khabiir ka faallooda arrimaha gobolka ayaa BBC-da uga warramay waxa keenay in golaha ammaanka ay go’aanno kala duwan ka qaataan Eritrea iyo Soomaaliya.
“Haddii aan taariikhda dib u eegno, Eritrea waxaa xayiraaddaas sannadkii 2009-kii loo saaray cabsi laga qabo awgeed, ka dib markii ay dagaal la gashay waddamo ku yaalla gobolka iyo in looga shakiyay iney ku xad gudubtay xayiraadda hubka ee soomaaliya. Laakiin Soomaaliya waxaa xayiraadda sannadkii 1992-kii loo saaray dagaallada sokeeye awgood. Sababta ugu weyn ee Soomaaliya looga qaadi la’yahay waa in dowladda aysan wali oggolaanin iney wada shaqeyn dhex marto iyada iyo guddiga kormeerka ee loo yaqaanno Monitoring Group. lama oga meelaha uu hubka u yaallo dowladda Soomaaliya iyo waddamada hubka siiya, xal looma hayo suuqyada hubka lagu iibiyo ee Soomaaliya, lamana xakameyn karo kooxha hubeysan sida burcad badeedda iyo Al Shabaab. Marka Soomaaliya caqabadahaas badan ee heysta awgood ayaan xilligan sahleynin in cunaqabateyntaas laga dul qaado”, ayuu yiri Caalin.
Marxaladihii ay soo martay cuqabateynta Hubka ee Soomaaliya
Bishii Janaayo ee sannadkii 1992-kii ayaa ayaa markii ugu horreysay qaraar ka soo baxay golaha amaanka oo uu tirsigiisu ahaa 733 cunaqabateynta hubka lagu saaray Soomaaliya, xilligaasoo ahayd 1 sano ka dib markii ay burburtay dowladdii dhexe.
-Bishii Juun ee sannadkii 2001-dii, qaraar uu tirsigiisu ahaa 1356 oo ka soo baxay golaha amaanka ayaa dib u eegis loogu sameeyay xayiraadda hubka ee Soomaaliya, waxaana laga soo reebay hubka qaar iyo qalabka milatariga oo cayiman, si loogu adeegsado howlaha la xiriira bani’aadanimada.
Bishii Luulyo ee sannadkii 2002-dii, qaraar uu tirsigiisu ahaa 1425 oo ka soo baxay golaha ammaanka ayaa lagu kala caddeeyay hubka laga mamnuucay Soomaaliya waxaana lagu qeexay in cunaqabateynta ay ka mid tahay mamnuucitaanka ka ganacsiga hubka.
-Bishii Diseembar ee sannadkii 2006-dii, qaraar uu tirsigiisu ahaa 1725 oo ka soo baxay golaha amaanka ayaa xayiraaddii hubka looga qaaday Soomaaliya. Qaraarkaas ayaa u oggolaaday urur goboleedka IGAD iyo midowga Africa iney faragalin ku sameeyaan xaaladda Soomaaliya ayna ciidamo ka socda waddamada gobolka geeyaan si ay gacan u siiyaan dowladda Soomaaliya ee taageerada ka heysata Qaramada Midoobay isla markaana ay ka soo hor jeedeen kooxaha hubeysan.
Bishii Febraayo ee sannadkii 2007-dii, qaraar uu tirsigiisu ahaa 1744 oo ka soo baxay golaha amaanka ayaa lagu xaddiday cunaqabateynta oo gaar looga dhigay dhinacyada aan dowladda ahayn ee Soomaaliya ka dagaallama. Waxaa qaraarkaas lagu oggolaaday in Soomaaliya la geyn karo hub iyo saanad milatari oo looga gol leeyahay in lagu garab istaago dowladda Soomaaliya.
-Bishii Nofeembar ee sannadkii 2008-dii, qaraar uu tirsigiisu ahaa 1844 ayaa wax looga baddalay cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya waxaana lagu bartilmaameedsaday cid walba oo ku xad gudubta xakameynta hubka.
-Bishii Diseembar ee sannadkii 2009-kii, qaramada Midoobay ayaa cunaqabateynta dhinaca hubka ku soo rogtay dowladda Eritrea, ka dib markii lagu eedeeyay iney ku xad gudubtay xayiraadda hubka ee saarneyd Soomaaliya.
-Bishii Maarso ee sannadkii 2013-kii, qaraar uu tirsigiisu ahaa 2093 oo ka soo baxay golaha amaanka ayaa wax looga baddalay cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya iyo hababka loo isticmaalo waxyaabaha la xiriira saanadda milatariga ee la siiyo dowladda Soomaaliya, waxaana lagu sii xoojiyay cunaqabateynta ka dhanka ah dhinacyada aan dowladda ahayn.
In muddo ahba dowladda federaalka Soomaaliya ayaa u xusul duubeysa in gabi ahaanba lagu dul qaado xayiraadda hubka, si ay cudud ugu hesho la dagaallanka Al Shabaab.
Balse Qaramada Midoobay ayaa ku adkeysatay in haddii Soomaaliya laga qaado cunaqabateynta uu hubka noqon karo mid faraha ka baxa ama gacanta u gala dhinacyo aan ku habbooneyn.
Qaraarkan ugu dambeeyay ee ay golaha amaanka bishan ku cusbooneysiiyeen cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku xad gudubtay xayiraaddii lagu sameeyay hubka ayna ka tallaabsatay hubka loogu tala galay in ey isticmaasho.
Jubbaland Oo Digniin U Dirtay Dadka Baraha Bulshada Ku Faafiya Wararka
1,732,461 total views, 2,005 views today
1,732,461 total views, 2,005 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
1,732,223 total views, 2,005 views today
1,732,223 total views, 2,005 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
1,732,221 total views, 2,005 views today
1,732,221 total views, 2,005 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
1,731,664 total views, 2,006 views today
1,731,664 total views, 2,006 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
1,731,603 total views, 2,004 views today
1,731,603 total views, 2,004 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]